Momba anay - Wuxi CRE New Energy Technology Co., Ltd.
Wuxi CRE New Energy Technology Co., Ltd dia mpisava lalana amin'ny famolavolana, fampandrosoana ary
famokarana sarimihetsika capacitors any Shina.Reharehantsika ny manana mahay, mazoto ary
ekipa natokana ho an'ny famolavolana sy ny fampandrosoana.
Vina sy fanambarana iraka
Ny soatoavin'ny orinasa dia efa tafiditra ao amin'ny voalohany (CRE) izay maneho ny fandraisana anjara, ny fanamafisana ary ny fahaiza-manao.
Ny tanjonay dia ny hanome vahaolana vaovao ho an'ny vondrom-piarahamonina manerantany mba hifandraisana amin'ny tontolo elektronika tsy azo ihodivirana sy tsy azo ihodivirana.
Ny iraka ataonay dia ny ho lasa iray amin'ireo mpamatsy capacitor malaza indrindra eto an-toerana sy iraisam-pirenena.
CRE dia mpamatsy eran-tany amin'ny kapasitera sarimihetsika metaly nanomboka tamin'ny 2011, nanolotra vahaolana azo itokisana sy matihanina ho an'ny elektronika herinaratra;mandalina sehatra isan-karazany ao anatin'izany ny automation indostrialy sy ny fitsitsiana angovo, ny herinaratra herinaratra, ny fitaterana an-dalamby, ny fiara elektrika ary ny angovo vaovao maharitra.Ny vahaolana capacitor azo ianteherana, kalitao ary optimized namboarina ho an'ny mpanjifanay no laharam-pahamehanay.
Be dia be ny vokatra capacitor atolotra ho an'ny PV/rivotra herinaratra inverter, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, lalamby hery rafitra hery, EPS, UPS, APF, SVG, loharanon-kery manokana famatsiana, hery fitantanana / fampitana, mitondra rafitra, E-fiara sns. dia ampiharina indrindra amin'ny DC-Link, IGBT snubber, avo-volt resonance, coupling ary AC sivana.
Amin'izao fotoana izao, manana patanty 20 mahery ny CRE ary nohamarinin'ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001 sy TS16949 ary fikambanana fiarovana UL.
Mpanjifa, mpiara-miasa ary ny ho avy
Tsy ny orinasa ihany no nanompo ny mpanjifa teto an-toerana, fa ny CRE dia nanamboatra vokatra ho an'ny orinasa manerana izao tontolo izao.
Tamin'ny 2016, CRE dia nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa stratejika niaraka tamin'ny DKE, Vaomiera Alemana momba ny Teknolojian'ny Elektrika, Elektronika & Fampahalalam-baovao an'ny DIN sy VDE.ERC ho an'ny elektronika herinaratra dia natsangana ho an'ny tanjona R&D.
Wuxi CRE New Energy dia manantena ny hiara-hiasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka stratejika manerantany.Miaraka isika dia hitarika ny fampiharana bebe kokoa ny sarimihetsika capacitors eo amin'ny sehatry ny elektronika, mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny tontolo iainana angovo vaovao sy ny fanompoana tsara kokoa ny mpanjifa maneran-tany.